Hanitra ROBEL, Author at FJKM Amparibe Famonjena
Auteur/autrice : Hanitra ROBEL
Alahady 16 Janoary 2022
“MAHARITRA TSY MIOVA NY TOMPO”
Fanompoam-pivavahana ho fisaorana an’Andriamanitra ary nitondrana amim-bavaka ny Filohan’ny FJKM
« Miasà, miovà, mivavaha, miasà »
Dr. Irako Andriamahazosoa
Ity alahady ity dia natokan’ny FJKM ho fitondrana amim-bavaka ny Filoha, dia ny Mpitandrina Dr Irako Andriamahazosoa Ammi sy ny ankohonany ary ny taom-piasana 2022. Teny amin’ny Coliseum Antsonjombe no nanatanterahina ny fotoana ary nisy fidirana indroa, dia ny tamin’ny 7 ora sy ny tamin’ny 10 ora sy sasany maraina. Ny fidirana tamin’ny 7 ora no taterina amintsika eto. Ny nitarika ny fotoana dia ny Mpitandrina Rakotobe Rajaomanjato Dodaherisoa, mpanolotsaina ao amin’ny Birao Mpiandraikitra Foibe (BMF). Ny nitondra ny hafatra kosa dia ny Mpitandrina Andriamampianina Zaka Hary Masy, Filoha mpanampy. Nozaraina roa izany ny synodamparitany nanatrika ny fotoana. Ny Synodamparitany Antananarivo Andrefana, izay misy ny Fitandremana Amparibe Famonjena, sy ny SP Antananarivo Avaradrano, no niditra tamin’ny 7 ora maraina. Azonao henoina eto ny hafatry ny filoha.
Ho fiderana an’Andriamanitra sy ho fanomezam-boninahitra Azy dia niarahan’ny Fiangonana namaky teo am-pitsanganana ny Salamo 136 : 1-9 hoe : «1 Miderà an’ i Jehovah, fa tsara Izy; Fa mandrakizay ny famindram-pony. 2 Midera an’ Andriamanitra Avo Indrindra*; Fa mandrakizay ny famindram-pony. [Heb. Andriamanitry ny andriamanitra]. 3 Miderà ny Tompon’ny tompo; Fa mandrakizay ny famindram-pony; 4 Izy irery no Mpanao fahagagan-dehibe (Fa mandrakizay ny famindram-pony), 5 Izay nanao ny lanitra tamin’ ny fahendrena (Fa mandrakizay ny famindram-pony), 6 Izay namelatra ny tany ho ambonin’ ny rano, (Fa mandrakizay ny famindram-pony), 7 Izay nanao ireo fanazavana lehibe (Fa mandrakizay ny famindram-pony), 8 Dia ny masoandro ho mpanapaka ny andro (Fa mandrakizay ny famindram-pony), 9 Ary ny volana sy ny kintana ho mpanapaka ny alina (Fa mandrakizay ny famindram-pony) ». Nohiraina ny hira FF 13 « Mihirà fihirambaovao ».
Nisy vavaka fiderana sy fisaorana ary fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra noho ny nahafahana niombom-bavaka, sy nahazoana fitahiana velon’aina.
Nambara ny sitrapon’Andriamanitra izay nalaina tao amin’ny Daniela 6 : 27 « Manao lalàna aho mba hangovitan’ny olona sy hatahorany eo anatrehan’Andriamanitr’ i Daniela eran’ny fanjakako rehetra; fa Izy no Andriamanitra velona sady maharitra mandrakizay; ny fanjakany haharitra hatramin’ny farany ».
Natao ny hira FFPM 445 : « Jeso mora fo indrindra » taorian’izay.
Nanao ny vavaka fifonana ny mpitarika, nangataka famelana noho ny tsy fahatanterahana izany sitrapon’Andriamanitra izany. Natao ny hira FFPM 437 : 1, 2 « Ry Jesoa Kristy Tompo ».
Nomena ny famelankeloka atolotr’Andriamanitra nalaina tao amin’ny Isaia 48 : 9-12 / Salamo 32 : 1–2.
Natao manaraka izany ny hira FF 36 : 1 « Vahoaka sesehena ».
Niara-nanonona ny Fanekempinoana Apostolika ny rehetra ary nisy feon-javamaneno.
Ny Mpitandrina Rakotonindrainy Jaona, Sekretera Jeneraly, no nilaza ny raharahan’ny Fiangonana. Anisan’ny voalazany tamin’izany fa misokatra ny fisoratana anarana amin’ny fanadinana ho Mpitandrina ; ny 29 janoary dia natokana ho fifadian-kanina ; hosokafana ny jobily fankalazana ny faha 25 taona ny radio Fahazavana.
Taorian’izay dia niroso tamin’ny rakitra sy fanomezana. Nanao anjara hira moa ireo antoko mpihira nandritra izay fotoana izay. Ny hira FFPM 275 : 1, 2 « Raisonao ry Tompo soa » no natao ho fanolorana ny rakitra.
Natao avy hatrany ny hira FFPM 770 : 1, 4 « Hajain’ny saiko ».
Notanterahina ny fotoana ho an’ny ankizy sy ny tanora. Ny Mpitandrina Razakarivony Charlot, Tonian’ny Sekoly Alahady Foibe, no nanatanteraka izany. Nanao vavaka izy, ary nasaina nitsangana ireo mpikambana rehetra ao amin’ny Sampana. Ny Eksodosy 20 : 12 « Manajà ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro hianao ao amin’ ny tany izay omen’ i Jehovah Andriamanitrao ho anao » no nentiny tamin’izany. Nambarany fa ireo ray aman-dreny dia ireo niteraka, ny mpitondra fivavahana, ny mpitondra Fanjakana ary nolazainy fa fatiantoka ny tsy fanajana an’ireny. Tantara no nentiny nanazavana izany teny izany.
Nohiraina ny hira Fifohazana 83 : 1, 5 « Ny Baiboly re » mialoha ny vavaka sy ny vakiteny.
Nivavaka nangataka ny fahafenoan’ny Fanahy Masina Randriana Voahangy, ary nanao ny vakiteny nisesy kosa ireo Tonia telo ao amin’ny Departemantan’ny Fiangonana, Sekoly ary Mpiasa sy vola ary fananana. Ny perikopa dia ny Isaia 46 : 3-7, Jaona 8 : 52-59 ary ny Romana 11 : 25-32. Natao ny hira FFPM 163 : 1, 3 « Jesosy irery ihany » mialoha ny hafatra.
Ny Filoha mpanampy Andriamampianina Zaka moa no nitondra ny hafatra. Ny boky tao amin’ny Isaia 46 : 1 – 7 no nakany izany.
Andriamanitra dia tokana ihany. Mety ho maro ny karazana andriamanitra teo amin’ny Babyloniana, ka rehefa resy izy ireo dia resy ihany koa ny andriamanitra izay nivavahan’izy ireo. Ny Andriamanitry ny Israely kosa dia ilay tsy miova hatramin’izay ka hatramin’izao. Io Andriamanitra io dia miteny fa tsy ampitenenina. Izy no mibaby, mitrotro ary mitondra antsika. Ny nanjo ny zanak’Israely dia tena Andriamanitra mihitsy no nanao izany mba hahatonga saina azy ireo. Io Andriamanitry ny Israely io no Andriamanitry ny kristiana.
Nisy mpandinika vahiny, hoy ny mpitoriteny, nandalo teto Madagasikara ; Charles Renel no anarany, ary nanao fanadihadiana izy io mikasika ny Malagasy.
Ny razana hoy izy, teo amin’ny Malagasy dia ireo fianakaviana teo aloha, ireo ao am-pasana ary velona ao an- tsaina ny momba azy.
Ny andriamanitra kosa, na hoe andriananahary, dia ireo razana izay efa tsy tadidy intsony ny momba azy. Razana ihany ireo, fa efa razana lavitra.
Rehefa miteny izany hoe ho tahian’andriamanitra sy ny razana, dia tsy ilay Andriamanitry ny kristiana izany. Mitaiza antsika izany ny amin’ny finoantsika kristiana.
Io Andriamanitra io dia mitondra antsika amin’ny fampandrosoana, fifankatiavana, mandroso, manaja ny zon’olombelona.
Teo amin’ny asa vavolombelona dia nitondra ny teny ny Birao Mpiandraikitra Foibe (BMF), ary natao ny hira FF 1 : « Mitsangana ianao ry mino ».
Nanao ny teny fiarahabana ny Filoha, ny mpisolotenan’ ny BMF. (Afaka henoina ato izany fiarahabana izany). Nitondra tononkalo ihany koa moa ho an’ny Filohan’ny FJKM.
Nandray fitenenana ny Filoha Irako Andriamahazosoa, taorian’izay. Teboka efatra no nentiny tamin’izany : Mitrakà, Miovà, Mivavaha, Miasà. Ireo no fitondran-tena tokony hananantsika mandritra ity taona 2022 ity indray.
Natao ny hira FF 23 : « Andriamanitra ô, Ry Tompo Zanahary » namaranana ny fotoana. Nomena ny tsodrano ary nirava tamim-pilaminana ireo mpiara-mivavaka tonga tao.
Alahady 09 Janoary 2022
Alahady natokana ho an’ireo tompon’andraikitra sy mpanao raharaha ny Fiangonana
« Fa firenena masina ho an’i Jehovah Andriamanitrao ianao, fa ianao efa nofidin’i Jehovah Andriamanitrao ho firenena rakitra soa ho Azy mihoatra noho ny firenena rehetra ambonin’ny tany » Deotoronomia 7:6
Alahady notarihin’ny Vaomieran’ny Aim-Panahy, alahady natokan’ny fitandremana FJKM Amparibe Famonjena nitondrana am-bavaka sy niarahabana ireo tompon’andraikitra sy mpanao raharaha ny Fiangonana no tanterina izao.
Ny fotoam-bavaka natrehin’ny Fiangonana mivantana tao an-tranon’Andriamanitra tamin’ny 9 ora maraina, izay notarihin’ny diakona ao amin’ny Vaomieran’ny Aim-Panahy, Ramino Lalaina. Raharijaona Solofonirina, Mpitandrina, no nitondra ny Tenin’Andriamanitra. Ny litorjia endriny faharoa no narahina.
Nisy feon-javamaneno nandritra ny fidiran’ny mpitarika sy ny diakona. Azonao henoina eto ny hafatra.
Ho fiderana an’Andriamanitra sy fanomezam-boninahitra Azy dia niarahan’ny Fiangonana namaky teo am-pitsanganana ny Salamo 146 : 1-5 hoe : « Haleloia, miderà an’i Jehovah ry fanahiko. Hidera an’i Jehovah aho raha mbola miaina koa. Eny hankalaza an’Andriamanitra aho raha mbola velona koa. Aza matoky ny lehibe. Na ny zanak’olombelona izay tsy mahavonjy. Mila ny fofonainy, ka miverina ho amin’ny taniny izy. Ary amin’izany indrindra no hahafoanan’ny fikasany. Sambatra izay manana an’Andriamanitr’i Jakoba ho Mpanampy azy sady manantena an’i Jehovah Andriamaniny. » Nohiraina ny hira FFPM 171:2 « Tompo mandahatra hendry ».
Nisy vavaka fiderana sy fisaorana sy nanomezana voninahitra an’Andriamanitra noho ny nahafahana niombom-bavaka, nahazoana fitahiana sy velon’aina. Feon-javamaneno fohy ny nanohizana ny vavaka.
Ny mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny K6, Rado Navalona no nitarika izany.
Nivavaka izy teo am-panombohana ary andinin-tSoratra Masina noraisiny dia ny Isaia 41 :10a « Aza matahotra ianao fa momba anao Aho ».
Ny tantara fohy mahakasika tovovavy kely tao anaty fiaramanidina no nangalana ny hafatra. Nikoropaka, nikotaba, nikiakiaka, kivy sy ketraka, ny mpandeha sasany tao anaty fiaramanidina taorian’ny filazan’ny mpanamory ary fampandrenesany mba hamatotra tsara ny fehikibo fiarovana fa misy « panne » teknika. Nisy kosa ny nitomany, tao kosa ny nivavaka. Ankizivavy kely iray kosa no sady tsy nikorapaka ary tsy nikotaba fa nilamina tsara. Taorian’izay dia tafapetraka tsara ilay fiara-manidina. Rangahy iray no nahatsikaritra ny filaminany sy ny fahatoniny tsara ka nanontany azy hoe « fa maninona ianao no tsy mba mikotaba toy ny olona rehetra ?», namaly ity ankizivavy kely nanao hoe « fantatro ilay mpanamory ka tsy matahotra aho, mayoky azy aho, fa ny raiko izy ».
Raha ampifandraisina amin’ny fiainantsika izany dia :
– Fiaramanidina : izao tontolo izao
– Mpanamory : Jesoa Kristy
– Mpandeha : olona rehetra toa ahy sy ianao
– Olana ara-teknika : olana isan-karazany miseho amin’ny fiainantsika
Hitan’ny Tompo avokoa ny olantsika rehetra, tahotra sy tebiteby sy ahiahy. Ataon’ny Tompo avokoa izay rehetra anavotany antsika.
Nohirain’ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady teo am-pitsanganana ny hira FFPM 430 :3-4 « Endrika Sariaka ».
Natao avy hatrany ny hira FFPM 206 :1-4 « Ny Teny Masinao ». Nivavaka nangataka ny fahafenoan’ny Fanahy Masina ny diakona Rabenandrasana John avy ao amin’ny Vaomieran’ny Aim-panahy. Razafimaharo Hanitra kosa no namaky ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao, araka ny perikopa voalahatra : Deoteronomia 7:6-11, Marka 12:28-34, Jakoka 1:16-21. Nohirain’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny hira FFPM 177 : 1-2 « Ry Fanahy Mpanazava» mialohan’ny Toriteny.
Ny Deoteronomia 7 :6-11 no andinin-tSoratra Masina nitondrana ny hafatra.
Miompana amin’ny lohahevitra hoe « Maharitra tsy miova ny Tompo », sy ny alahady fiarahabana ireo mpanao raharahan’ny Fiangonana.
Ny zanak’Israely hiditra tao amin’ny tany Kanana no resahana eto. Ny tany Kanana dia voalaza fa misy firenena fito matanjaka, lehibe sy mahery. Raha tsy maharesy ireo izy ireo dia tsy afaka miditra sy mandova izany tany Kanana izany. Ny teny hoe « lehibe » eto dia hilazana ny tanàna efa mandroso, manana sivilizasiona matanjaka. Raha eo amin’ny lafiny ara-tafika kosa dia efa lasa lavitra, raha manoloana sy ampitahaina ny zanak’Israely izay tsy manana na inona na inona fa hazo sy tehiny no entiny miady. Ny « mahery » kosa eto dia entina hilazana zavatra goavana, olona « géant » no hiady aminy, misy eo amin’ny efatra metatra ny halavany ary roa metatra ny sorony. Izany no olona hiady amin’ireto Israely ireto. Nampanantenaina sy nomen’i Jehovah Andriamanitra azy ireo mantsy io tany Kanana io ho lovany.
Marihina fa firenena voandevozina tany Egypta ireo handeha hanafika ny tany Kanana ireo, ary nalefa andeha hiady ary hiditra ny tany Kanana. Izay no hisintonan’Andriamanitra ireto zanak’Israely ireto hiditra ny tanana tondrahan-dronono sy tantely.
Eto dia misy ny fitsipika sy didy nasaina narahan’ireto zanak’Israely ireto mba hitarafana ny Tenin’Andriamanitra, ary ho tsarovany fa masina eo anatrehan’i Jehovah izany Israely izany.
Zavatra roa no azo tsoahina amin’ity andinin-tSoratra Masina ity :
– Fitazonan’Andriamanitra ny fanekena
– Fitandreman’Andriamanitra ny fiainianany
1-Fitazonanan’Andriamanitra ny fanekena eo amin’ny olona na ny firenana
– momba ny firenena Andriamanitra raha mitandrina ny fanekena nataony io firenena io,
– mandringana io firenena io kosa Izy raha mitsangana ho fahavalony io firenena io,
Izany no tokony ho tsarovantsika eo anatrehany ny fanekena ataontsika raha manao voady isika. Ohatra noraisina ho mpandray ny Fanasan’ny Tompo, Diakona, afaka fanadinana….. Tadidio fa zavatra roa no miandry antsika : na isika tahin’Andriamanitra sy ombany , na isika haringany.
Asehon’Andriamanitra amin’ny alalan’ireto firenena ireto ny fitazonany ny fanekeny :
natokana sy nosarahan’Andriamanitra teo amin’izao tontolo izao izany firenena Israely izany. Masina toy izany isika, voatokan’Andriamanitra, tsy tian’Andriamanitra hifangaroharo amin’ny hafa. Rehefa manao fanekena eo anatrehan’Andriamanitra dia masina.
olona nofidin’Andriamanitra ho rakitra soa ho azy (Deoteronomia 30-31 ), maharitra hatramin’ny taranaka mifandimby (arivo mandimby), izany hoe maharitra mandrakizay, « génération » iray eo amin’ny 50taona.
Mialoha ny hidirany amin’io tany Kanana io dia asehon’Andriamanitra fa firenena nofidin’Andriamanitra ary masina izy ireo. Ary azon’ny firenena Israely tokoa ny tany.
Maharitra tsy miova ny Tompo, ilay didy napetraka tamin’ny andron’i Mosesy dia tokony ho tanterahina. Ny fanekena an’Andriamanitra dia tokony ho tanterahintsika tahaka ny nandovana ny tany Kanana. Ny didy izay napetrak’Andriamanitra eto dia : ny fitiavana Azy, sy ny fitiavana ny namana. Isika no mandova ny firenena Israely izany. Izany didy izany dia natao hitiavana amin’ny fo, ny fanahy, ary ny hery manontolo.
Ao anaty ny fandraisan-tanana ireto mpanao raharahan’ny Fiangonana ireto dia misy ny didy, ny fitsipika, ny fanekena napetraka ato anatin’ny Fiangonana . Rehefa miditra ka handray ny andraikitra ianao dia ny Tompo no nanaovanao ny fanekena. Matoa mandray izany andraikitra izany, dia tandremo ny manao kitoatoa izany raharaha izany. Raha te handova izany fiainana mandrakizay izany ianao dia manaova tahaka ny zanak’Israely niditra ny tany Kanana. Izany no antom-pisian’ny andro alahady na fotoana manokana ho azy ireo, satria zava-dehibe amin’ny Fiangonana io asa atao io. Olona masina eo anatrehan’Andriamanitra ka Izy no hitsara anao. Andriamanitra no mamporisika hanao ny asa. Na mpiasam-panjakana na mpiasa « privé » isika, na ato anaty Fiangonana na ivelany Fiangonana dia tokony ho hita taratra ny maha kristiana.
2-Mitandrina ny fianianany Andriamanitra
Asehony amin’ny zavatra roa izay nitondrany ny firenena Israely izany :
Famonjena azy amin’ny sarotra
Famindram-pony amin’izay tiany satria mankatoa Azy
Maharitra tsy miova Andriamanitra. Ho tanterahina amiko sy aminao koa izany teniny izany. Izay no antony nandraisana ny vinan’ny FJKM hoe « Madagasikara ho an’i Kristy ary Kristy ho an’ny Madagasikara. » Ary toriana etsy sy eroa. Andriamanitra tena maneho izany tahaka ny zanak’Israely, firenena fito no roasina. Resy ireo firenena fito ireo, voaraoka, ringana teo anatrehan’ireto firenena kely ireto satria Andriamanitra no namonjy azy ireo tamin’ny sarotra.
Famindram-pon’Andriamanitra mitoetra eo amin’ny olona izay tia azy. Rehefa natoky ity firenena ity dia nandresy. Jakoba eto no resahana, ilay mpanompon’Andriamanitra nanoratra ity epistily ity. Olona masina eo anatrehan’Andriamanitra, miteny sy mamporisika nohon’ny fahitany sy ny fahalalany ny fitondran’Andriamanitra ny firenena. Mihainoa sy mankatoa ry Israely, aza mety fitahana ianareo. Mihaino sady mankato izay ambaran’Andriamanitra no andrasana amin’ny Mpino.
Alahady natokana ho an’ny mpanao raharahan’ny Fiangonana anio, Andriamanitra mitana ny fianianany, ianao kosa ahoana?
Mihainoa sy mankatoa ianareo, tanteraho tsara ny andraikitra. Ho anao izay nofidin’ny olona, izay nantsoin’Andriamanitra, namindran’Andriamanitra fo sy novonjeny ianao, tanteraho ny fanompoanao. Hoy ny teny Soratra Masina « Fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin’ny Tompo ».
Aoka hanatanteraka tsara ny andraikitra isika, aza manilika amin’ny ry zalahy izay tsy hita mandraka androany, fa tanteraho ny fanompona amin’ny fifaliana, amin’ny fahazotoana ny asan’ny Tompo. Aoka hafana fo amin’ny fanompoana ny Tompo isika. Ny famindrampon’Andriamanitra no naha toy izao antsika.
Hafatra : izaho sy ianao nanao fanekena ho Kristiana, « Aza manadino ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaony sasany » (Hebreo 10:25a). Aoka isika tsy ho variana. Mitaona anao ny Tenin’Andriamanitra izay tsy nijanona tamin’ny andron’ny zanak’Israely fahiny ihany, fa hatramin’ny ankehitriny ka mandram-piverin’Andriamanitra.
Taorian’ny feon-javamaneno fohy dia nanao ny anjara hirany ny Sampana Taniketsa « Hidera ny Anarany »
Nanao ny vavaka fifonana ny mpitarika sy nanolotran ny Teny famelan-keloka. Notononin’ny Fiangonana ny fanekem-pinoana niarahana tamin’ireo vavolombelona talohantsika (Lah.2). Nisy feon-javamaneno.
Rakotomanana Andry, Birao-mpiangonana-Mpitantsoratra, no nilaza ny raharaham-piangonana, Ny andinin-tSoratra Masina nanombohany izany dia noraisiny tao amin’ny Deoteronomia 7:9 « Koa aoka ho fantatrao fa Jehovah Andriamanitrao ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky, Izay mitandrina fanekena sy famindram-po amin’izay tia Azy sy mitandrina ny didiny, hatramin’ny taranaka arivo mandimby »
Toy izao ny asa tsara fantarina ary hotanterahin’ny Fiangonana sy hoentiny amim-bavaka:
· Tanterahina anio eny amin’ny FJKM Andrainarivo ny famindrana andraikitra eo amin’ny FLM/FJKM amin’ny fitantanana ny FFPM
· Fanaovazana ireo komity sy vaomiera ao amin’ny foibe FJKM. Izay liana ny amin’izany dia mandefa ny anarana feno mialoha 25 janoary 2022
· Fiarabahana sy fitondrana am-bavaka ny mpanao raharaha sy ireo manolo-tena an-tsitrapo ny asan’ny Fiangonana androany
· Sabotsy 15 janoary : Fivorian’ny mpihevi-draharaha amin’ny 8 ora maraina
· Alahady 16 janoary :
– Mikatona ny Fiangonana noho ny fanompoam-pivavahana sy fangatahampitahiana ny Filoha FJKM mianakavy eny amin’ny Coliseum Antsonjombe. Amin’ny 6 ora sy sasany ny fahatongavan’ny Diakona tompon’anjara eny antoerana
– Antsam-panahy karakarain’ny komity 185 taona namonoana ny maritiora, amin’ny 5 ora hariva eto amin’ny FJKM Amparibe, handray anjara amin’izany ny antokom-pihira HAFA
· Alahady 23 janoary : alahadin’ny firaisan’ny Sampana, fanokafana ny taom-pankalazana ho an’ny Sampana hanamarika izany mandritra ity taona 2022 ity : STK, STKZo, Gazety Taratry ny Famonjena, Sampan’Asa Fitoriana ny Filazantsara, Komity fankalazana ny fisotroan-drononon’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina izay hiasa mandritra ny roa taona
· Fanentanana ny Fiangonana hivavaka, hanaja ireo fepetra ara-pahasalamana : ny elanelana 1 metatra, hanao aro-vava orona, hanasa tanana amin’ny rano sy savony
Razafindraibe Bam, Biraom-piangonana, no namaky ny tatitry ny Vokadehibe voaray sy ny voady rehefa avy nanolotra ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Salamo 44 :1
– Hira FF 53:3 « Havaoziko ny voadiko », noho ny nahatrarana ny taona vaovao 2022, ny fifankahitany Ray amandreny sy ny zanaka.
Hira fanolorana ny rakitra FFPM 441 : 3 « Raiso ny fahaizako » no notanterahina teo am-pitsanganana ho fanolorana ny fanatitra sy fanavaozana fanolorantena.
Fiarahabana ireo tompon’andraikitra sy ny mpanao raharahan’ny Fiangonana.
Ho fandraisan-tanana azy ireo dia nilahatra nandalo teny amin’ny alitara rehefa voaantso tsirairay ny anarana sy ny andraikitra ka notolorana valopy misy ny teny fiarahabana sy « calendrier » tetikandro 2022
Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitarika izany. Nentina am-bavaka ny fanompoam-pivavahana ho amin’ny firaisan’ny Sampana, ny fanompoam-pivavahana hatao eny amin’ny Coliseum Antsonjombe, ireo nahavita sy mbola handray anjara amin’ny voka-dehibe, ireo nangataka vavaka noho ny tsy fahasalamana, ireo mpanompo nanana havana nodimandry, nentina am-bavaka ireo manana hataka manokana rehetra, ny fihaonan’ny ray amandreny sy ny zanaka. Nofaranana tamin’ny « Rainay izay any an-danitra » niara-notononina izany.
Nohiraina ny hira FFPM 462 :1 « Eo an-tananao ry Raiko ». Notononina ny tondrozotra 2022. Natolotry ny Mpitandrina ny tsodrano. Ny hira FFPM 347 « Derao Andriamanitra » no hira namaranana ny fotoana. Nipetraka ny Fiangonana ary notononina ny Trinite.
· Nitendry orga: Rajaofetra Philippe sy Rajaofetra Anthonio (mpiofana ho mpitendry orga)
· Nikirakira ny fafana: Rakotondramboa Andry
· Nikirakira ny fanamafisam-peo: Ramahery Yves, Rabiazamaholy Hery Lanto
· Naka sary: Andriamampianina Faneva
· Nandray an-tsoratra: Raoliarizaka Bakoly
Alahady 26 Desambra 2021
« MINOA NY FIFALIANA AO AMIN’NY TOMPO »
Alahady farany amin’ity taona 2021 manaraka ny Krismasy
« Aoka ho faly ny lanitra ary ho ravoravo ny tany »
Ny fotoam-bavaka natrehin’ny Fiangonana mivantana teto an-tranon’Andriamanitra tamin’ny 9 ora maraina izao tanterina eto izao, izay notarihian-dRamatoa Raharijaona Bodo, ary ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitondra ny Tenin’Andriamanitra. Ny litorjia amin’ny endriny fahatelo no narahina. Mialoha ny fanombohan’ny fanompoam-pivavahana dia nohiraina ny hira fanevan’ny faha-160 taonan’ny Fiangonana « Fa masina ny tempolin’andriamanitra dia ianareo izany ».
Ho fiderana an’Andriamanitra sy fanomezam-boninahitra Azy dia niarahana namaky teo am-pitsanganana ny Salamo 96 :11-13 : « Aoka ho faly ny lanitra ary ho ravoravo ny tany. Aoka hirohodrohona ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy. Aoka ho faly ny saha sy izay rehetra eo aminy. Dia hihoby amin’izay ny hazo rehetra an’ala. Eo anatrehan’i Jehovah, fa avy Izy, Eny, hitsara ny tany Izy. Hitsara izao tontolo izao araka ny rariny Izy. Ary ny firenena amin’ny fahamarinany ». Taorian’izay dia natao ny hira FFPM 75 : 1-3 « Andro malaza ». Nisy vavaka fiderana sy fisaorana izay maneho ny voninahitr’Andriamanitra noho ny nahafahana niara niombom-bavaka tamin’ity farany taona 2021 ity, noho ny tombon’androm-pibebahana. Misaotra an’Andriamanitra noho ny fanomezany fifaliana tsy mety ritra, ny famindram-pony ny nahafahana niara nivavaka. Taorian’ny vavaka dia feon-javamaneno fohy.
Ny mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny K7, Rabiazamaholy Léa, no nitarika izany.
Ny tantara fohy mahakasika an’i Vony, 14 taona, no nanatsoahina ny lesona sy ny hafatra araka ny andinin-tSoratra Masina I Tesalonian 5 :21-22 « Fantaro ny zavatra rehetra, hazony mafy izay tsara. Fadio ny fanao ratsy rehetra ».
Zazavavy, sariaka dia sariaka i Vola, vokatr’izay dia nanana namana be dia be izy. Nampitandrina azy ny ray aman-dreniny mahakasika ny fitondran-tenany, momba ireo namany ireo. Kanefa dia niaraka tamin’ireo namany ireo ihany izy. Indray andro dia niharan-doza ny fiara nitondra azy sy ireo namany rehefa avy tany amin’ny toeram-pandihizana izy ireo. Namonjy an’i Vola tany amin’ny hopitaly ny ray aman-dreniny noho ny voina nahazo azy sady nitebiteby fatratra. Nifona tamin’ireo ray amandreniny i Vola ary nilaza hoe « Mety mbola ho voavonjy ve aho ? ». Hoy ny reniny « Eny anaka, voavonjy ianao »
Andriamanitra no tokony ekentsika. Ary dada sy neny no solotena hita maso. Rehefa mananatra ireny mpanabe ireny dia sahia manao « Eny » isika. Tokony ho lavintsika kosa ny ratsy rehetra dia manao « Tsia » isika.
Taorian’ny vavaka dia nohirain’ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady teo am-pitsanganana ny hira FFPM 79 « Sambasamba Zanahary ».
Mialoha ny vakiteny, nanao ny vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina i Rakotomalala Harizo. Namaky ny Tenin’ny Soratra Masina araka ny Perikopa voalahatra i Ranaivoson Toky : Isaia 40 : 6-8 ; Lioka 2 : 15-20 ; Asan’ny Apostoly 13 : 1-5. Nohirain’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny hira HF 12:1 “Feno toky ny Fanahy”. Toriteny no nanaraka izany.
Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitondra ny hafatry ny Tompo.
Ny Lioka 2 : 15-20 no andinin-tSoratra Masina nanompanana ny hafatra sy nakana ny lesona izay entina hamakivaky sy nankalazana ny krismasy. Nifantoka amin’ny tantara ny mpiandry ondry ny andinin-tSoratra Masina. Ny nataon’ny mpiandry ondry teto dia nandeha nijery sy namantatra ny feo reny sy izay nifanaovany tamin’i Maria sy Josefa. Ary hitany fa marina tokoa izany.
Eto dia mizara roa ny fitoriana ny filazantsara :
– Fitoriana ny filazantsara sady fankalazana an’Andriamanitra
– Fitoriana ny vaovao mahafaly izay fiderana ny Tompo
1-Fitoriana ny filazantsara sady fankalazana an’Andriamanitra
Nasehon’Andriamanitra tamin’ny alalan’ny feon’ny anjely Gabriela : “Voninahitra ho amin’ny Avo indrindra ary fiadanana ho an’ny olona ety amboniny tany”. Izany teny izany no manambara ny fanehoan’Andriamanitra ny fitiavany sy ny fiadanana ho an’ny olona ankasitrahany.
Hojerentsika ary ny fomba nentina nampielezana an’Andriamanitra izany voninahitra izany :
Noho ny fahatsiarovany ny zavatra hitany. Asain’Andriamanitra miantsoantso sy miorakoraka ny olona.
Ny Isaia farany dia milaza ny fiverenan’Andriamanitra ary nasaina miantsoantso sy midera an’Andriamanitra ny olona. Manala azy ireo ihany koa ao anatiny geja. Toy izany koa ny andron’ny mpiandry ondry. Tamin’izany fotoana izany dia nozanahany fanjakana Romana ny fanjakan’Israely, ka nahatonga ny olona hiantsoantso hoe “Rahoviana no ho avy ny Mesia?” Eto dia tonga tokoa ny Mesia.
– Inona no nataony mba hankalazana an’Andriamanitra?
o Nisy ny fanandratana an’Andriamanitra satria tena tretrika izy ireo,
o Nanome voninahitra an’Andriamanitra Ray Tsitoha ny olona. Hitan’izy ireo ihany koa ny fahaterahan’ilay zaza.
Eto dia ireo mpiandry ondry kely ireo no nanehon’Andriamanitra ny fanambarana ny vaovao mahafaly.
2-Fiderana ny Tompo : fitoriana ny vaovao mahafaly
Tsy toy izany kosa ny ankehitriny. Ao ny mpianakavy ny finoana izay mianatra amin’ny Setela, Sefala, ary Fitela, ao ihany koa ireo mirotsaka ho Pasitera. Tamin’izany fotoana izany kosa dia ny Tompo no mampiasa mivantana ary mirotsaka an-tsehatra. Olon-tsotra ary manetry tena any anaty bozaka tany no nitoriana ny filazantsara.
Zavatra roa no azo tsoahina:
– Fihobiana ny hery, ny fiventesana izany fahatsarana, fahalalana fa io zaza nohodidinina lamban-jaza io no olon-tsotra nahay nidera sy nofinidin’Andriamanitra.
– tsy ho an’ny olon-tsotra ihany ny hafatry ny Filazantsara, tsy teo amin’ny jiosy ihany koa fa eo amin’ny jentilisa. Manana anjara amin’izany ihany koa ny firenena rehetra.
Raha tsy niandoha tamin’ny Apostoly ny Vaovao Mahafaly tsy tonga taty Madagasikara ny Filazantsara. Betsaka ny manao “matraquage”, izany hoa mamerimberina. Misy ny antokom-pivavahana izay manao andoharano, toy ny “judaisme Madagascar” izay mampianatra ny hoe efa tonga ny Mesia. Mandray ny ankamaroan’ny Testamenta Vaovao izy, ary ny Filazantsara efatra kosa tsy misy noraisiny.
Fehiny, miverena, manetre-tena, ny fisainanao tsotra no ahitanao ny voninahitry ny Tompo sy ny filazanao ny Tenin’Andriamanitra.
Nisy ny feonjava-maneno fohy.
Nisy ny vavaka fifonana notononina. Hanetry tena, hifona sy hibebaka ary hanaraka izao vavaka izao isika. Misaotra an’Andriamanitra noho ny fitiavany sy ny fialany nenina amintsika isan’andro isan’andro. Miantso antsika mba handini-tena sy hibebaka. ny hafatry ny Filazantsara, kanefa rehefa nahita ny fahaterahan’ny Tompo dia nandeha nidera sy nankalaza. Misaotra ihany koa noho ny nanomezany ny Teny sy ny hafatra ahatonga antsika mba handini-tena. Mibebaka, mifona ary mangataka famelana noho ny fahadisoanay ry Tompo amin’ny fanaovana antsirambina. Mifona amin’ny fanaovana ny tafika masina ho fialam-boly na vacances. Mamela ny helokay, mamindra fo aminay. Omenao asa izahay, sarotra anefa izany. Mifona izahay satria tsy nahatanteraka ny asanao tsara. Amin’ izao farany taona izao, mivoady izahay fa tsy hanao izao sy izao. Fa amin’ny taona vaovao kosa hanao izao indray izahay. Mifona amin’ny fitondran-tena, ny fitafiana. Misaotra ry Tompo amin’ny fanoloran-tena teo amin’ny hazo fijaliana.
Nohiraina ny hira FFPM 415 :1 « Mifona aminao zahay »
Natolotry ny mpitarika ny Teny famelankeloka « Ary homeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no hataoko ao anatinareo ary hesoriko amin’ny nofonareo ny fo vato, ka homeko fo nofo,ianareo ». Ezekiela 36:26. Nohiraina ny hira FFPM 64:3 « Injany hiran-danitra ». Notononin’ny Fiangonana ny fanekem-pinoana niarahana tamin’ireo vavolombelona talohantsika (Laharana 4).
Nisy feon-javamaneno ary nanao ny anjara hirany ny RFF “Noely ny fanantenana”.
Razafimaharo Maminirina, Biraom-piangonana, no namaky izany raharaha izany. Ny andinin-tSoratra Masina nanombohany izany dia ao amin’ny I Korintiana 3: 17b « Fa masina ny tempolin’andriamanitra dia ianareo izany ».
Toy izao ny asa nisongadina tsara fantarina ary hotanterahin’ny Fiangonana sy hoentiny am-bavaka:
– 29 desambra : Antsoina ny solontenan’ny rafitra, ny komity fisotron-dronono ny Mpitandrina hivory amin’ny 6ora hariva
– 22 janoary 2022 : fiaraha-miombom-bavaka eny amin’ny colesium, fangataham-pitahiana sy fitondrana am-bavaka ny taona vaovao 2022 ary ny taom-piasana Foibe FJKM. Misy ny fidirana in-droa 7ora30, sy 10ora
– alahady farany amin’ity taona 2021, famaranana ny taom-pankalazana faha 20 sy 30 taona’ny Sampana (SLK – Sampana Taniketsa, RFF, Vokovoko Manga, SMZM, Fifohazana,, K160)
– Fahatsiarovana ireo nodimandry ka nentina teto amin’ny Fiangonana
– Fizarana valisoa ho an’ireo nandray anjara tamin’ny fifaninanana Tenin’ny Soratra Masina.
– Tsy nianatra ny katekoma androany hariva
o 01 janoary 2022 : fidirana amin’ny 8ora30
o 02 janoary : fiarahabana ny zokiolona 70 taona no mihoatra, sy ny Mpitandrina, . Fidirana amin’ny 7ora sy amin’ny 10ora
– Tsy misy ny fiarahabana zokiolona any an-tokantrano noho ny hamehana ara-pahasalamana
– Akatoky ny fandraisana anio
– Antsoina ireo zokiolona na ny fianakavian’izy ireo mba hanavao ny fisoratana anaran’ireo zokiolona ho raisin-tanana
Tantely Andriamasinoro, Biraom-piangonana, no namaky ny voady rehefa avy nanolotra ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny I Tesaloniana 5 :15
Ny hetahetan’ny mpianakavin’ny finoana nentina teo anivon’ny Fiangonana dia fisaorana an’Andriamanitra fa afaka nanatrika ny fanaovam-batisa sy ny nahazoana fahasoavana ihany koa., fisaorana noho ny Fiangonana sy ny sampana izay nitaiza.
Ireo hira nangatahiny dia : Hira FF 7:1 « Tsy hainay ny hangina », Hira FFPM 731:1 » Enga anie ka ombanao Jesoa »
Ny hira vavaka FFPM 432: 2 « Mandra-piavin’ny Tompo, mivavaha » no notanterahina teo am-pitsanganana ho fanolorana ny fanatitra sy fanavaozana fanolorantena.
Sakrameta ny Batisa sy fitondrana am-bavaka ireo zaza nandray izany sakramenta izany.Nohiraina ny hira FFPM 248:1-2 « Nitondra ny zaza ny reny. »Ireo zaza natao Batisa :
– Razafimaharo Nirina Camilla Harintsoa
– Pruvot Yonnel Manoa
– Andriamihaja Miahy Aliya
– Andriamihaja Mahaliana Shanya Haroun
– Andriamihaja Mahatia Inaya Haroun
– Raharijaona Ranaivosolo Iharantsoa
– Andriamahatana Iantsa Kalointsoa
– Rakotoarivony Tiavina Raphael
– Rakoto Alson Princy Fandresena
– Rakoto Alson Princy Fifaliana
– Andriamahatana Kristen Ashley
– Andrianjafy Rakotonirina Hery Andrianina
Fizarana valisoa sy fitondrana am-bavaka ireo nandray anjara tamin’ny fahalalana ny Soratra Masina. Novakiana ny Salamo 119 : 34 « Omeo fahalalana aho mba hitandrina ny lalànao. Eny hitandrina azy amin’ny foko rehetra aho ». 284 no isan’ireo nandray anjara. 29 no nahazo valisoa ary 5 isaky ny sokajy taona no notolorana izany.
FAMARANANA NY FANKALAZANA
Famaranana ny taom-pankalazana faha 20 sy 30 taona ny sampana :
SLK – Taniketsa, RFF, Vokovoko Manga, SMZM, Fifohazana, Nandray anjara fitenenana ny solotena avy amin’ny SLK, Rabezandriny Solohery, ary nanolotra fanomezana (fitaovam-pihinanana) ho an’ny Fiangonana.
Famaranana ny taom-pankalazana ny faha 160 taona ny Fitandremana.
I korintiana 3: 17b « Fa masina ny tempolin’andriamanitra dia ianareo izany ».
Nisy ny tatitra ny zava-bita :
– Fanaovana vaksiny ny mpianakavy ny finoana izay notarihiny Ray amandreny Mpitandrina
– Tafika Masina tany Bevoay
– Randonnée teny Ambohijanaka : 224 no isan’ny mpandray anjara
– Tournoi K160 teny amin’ny kianja Andohalo
– Ivon’ny fankalazana : nisy ny famelaberan-kevitra sy ny taom-pankalazana
– Diampenin’i Rado : loha-hevitra niompana tamin’ny Finoana, Tanindrazana, Fiaraha-monina , niarahana tamin’ny zanaky ny Fiangonana sy ny fianakavian’i Rado
– Garden party teny Androhibe : nisy ny sakafo agape, hira ara-pilazantsara, fialamboly
– Fanolorana fanomezana niarahana tamin’ny katekomena
– Fizarana akanjo teny amin’ny fitandremana Paragoay
– Tsangambato faharoa : fanavaozana ny bassin miampy robinet sy ny ampahany amin’ny tokotany
Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitarika izany. Nitondra am-bavaka ny zanaky ny Fiangonana, ireo vahiny niara- niombom-bavaka tamin’ny Fiangonana, ny fanohizana ny fanatanterahana ny vokatra mba ho tratra ny tanjona, ireo niaram-boina izay nanaovana fisaonam-pirenena, ireo miaramila sy sivily, ny firenena, ny famaranana ireo hetsika fankalazana samihafa teto amin’ny fitandremana, ireo sahirana, marary, manamanjo, ireo mpanompo manana hataka manokana, nanao rakim-pisaorana sy voady masina, vita soa ny batisa, nisy ny tsy fahasalamana ary afaka nandray fitahiana sy fahasoavana, nandray fitahiana niray latabatra tamin’ny Tompo, vita ny fianarana izay natao teto an-tanindrazana ary manana fikasana hanohy ny fianarana any am-pita, mitondra ambavaka izao fotoana izao sy ho an’ireo izay tsy afaka manatrika. Nofaranana tamin’ny « Rainay izay any an-danitra » ny vavaka fangataham-pitahiana.
Nohiraina ny hira FFPM 76:1-3 « Miderà anio ry mino ». Notononina ny tondrozotra 2021. Natolotry ny Mpitandrina ny tsodrano.
Natao ny hira FFPM 67 :1-4 « Avia ry mino ». Nipetraka ny Fiangonana, notononina ny Trinite.
Nisy feon-javamaneno sy ny vavaka mangina ary mofo mamy nozaraina hoan’ny mpianakavin’ny finoana rehetra.
· Nitendry orga : Rajaofetra Philippe niaraka tamin’i Rajaofetra Anthonio (mpiofana ho mpitendry orga)
· Nikirakira ny fafana: Rajaofetra Arielle
· Nikirakira ny fanamafisam-peo: Rabiazamaholy Hery Lanto
Publié le 25 décembre 2021 30 décembre 2021
Sabotsy 25 Desambra 2021
“FIFALIANA TENA IZY” IVON’NY VOKA-DEHIBE TAONA 2021
“Voninahitra ho any amin’ny Avo indrindra ho an’Andriamanitra Ary fiadanana ho ety ambonin’ny tany ho an’ny olona ankasitrahany”
Lioka 2 : 14
Ho fenoin’ny Tompo fifaliana anie ny andrompiainanao. Izany no teny nifampiarahaban’ireo mpianakavin’ny finoana sy ny mpitandrina tamin’ny Sabotsy 25 Desambra 2021, andro krismasy ity. Raharijaona Bodo no nitarika ny fotoana, ary ny mpitandrina Raharijaona Solofo no nitondra ny hafatra. Ivon’ny voka-dehibe ihany koa moa ity andro anio ity. Ny litorjia endriny voalohany no nitondrana ny fotoana ary rakitra alitara no notanterahina noho izany voka-dehibe izany. Fidirana roa moa no androany ka ny fidirana tamin’ny 10 ora no tanterina amintsika eto. Taorian’ny feonjava-maneno fidirana dia noredonina avy hatrany ny hira faneva faha 160 taonan’ny Fiangonana.
Ho fiderana an’Andriamanitra dia novakiana ny Isaia 9 : 5 – 6 ary noventesina ny hira FFPM 67 : 1-2-3-4 “Avia ry Mino, hifaly sy hihoby …”. Natao ny vavaka fisaorana sy fiderana. “Nisaotra ny Tompo satria manana fifaliana Izy Tompo natolotra ho antsika olombelona. Nangataka ny Tompo mba hanatrika ny fotoana ho tanterahina. Nahatsiaro ireo olona maro izay tsy afaka mivavaka ihany koa ny mpitarika”. Nambara ny sitrapon’Andriamanitra izay nalaina tao amin’ny Isa.7:14 ; Mat.1:21 ; 1 Jao 4 : 2 sy 12. Rehefa izany dia natao ny hira Ffpm 68 : 1 – 2 “Re tokoa ny feon’anjely …”. Natao ny vavaka fifonana taorian’izany. Fifonana satria tsy nahatanteraka izany sitrapon’Andriamanitra izany. Natao ny hira Ffpm 64 : 3 “O ry mivesatr’entana, …”. Nambara ny teny famelankeloka taorian’izay taorian’izay. Nalaina tao amin’ny Jao. 3 : 17-18 ; II Kor. 5 : 17 ; Jao. 8 :11. Rehefa avy nambara izany dia natao ny hira FFPM 79 « Sambasamba Zanahary ». Ho fanavaozana ny finoana dia naira-nanononany fanekem-pinoana laharana voalohany. Nisy feonjava-maneno fohy taorian’izany.
Zoky Razafintsalama Hanta no nitondra ny fampianarana ho an’ny ankizy. Ny bokin’ny Asa 16 : 31b “Minoa an’I Jesoa Tompo hianao, dia hovonjena hianao sy ny ankohonanao”, no nitondrany ny hafatra ho an’ny ankizy. Teraka Jesoa hoy izy, mba hamonjy antsika mba hanana fiainana mandrakizay. Niara-nitsangana, namerina ny teny voalaza etsy ambony ary nivavaka ny fianakaviamben’ny sekoly alahady. Tsy nisy moa ny vaovaom-piangonana anio fa nitondra hafatra kosa nefa ny mpitandrina nilaza fa misy ny fotoampivavahana tokana ny 26/12 ary miditra amin’ny 9 ora ihany. Taorian’izay dia nanao ny fifampiarahabana nho izao andro Krismasy izao ny mpitandrina. “Ho fenoin’ny Tompo fifaliana anie ny andrompiainanao”. Izany no teny nifampirariana tamin’ity andro Krismasy ity.
Satria ivon’ny vokadehibe moa ny andro anio dia nanatanteraka ny rakitra alitara ny mpianakavin’ny finoana. Novakiana ireo voka-dehibe voaray. Nambara ary ary eo fa mahatratra 20 tapitrisa no vola voaangona hatreto. Nandritra ny rakitra alitara mora dia nanao hira 2 ny Hasin’ny Famonjena. Ho fanolorana ny rakitra dia natao ny hira Ffpm 75 : 3.
Mialoha ny vavaka sy vakiteny dia natao ny hira FFPM 71 : 1 ; 4 “Mihaino, mihainoa, …” Nanao ny vavaka Rabezandrina Solohery ary nanao ny vakiteny kosa dia Rabezandrina Lalaina. Ny perikopa anio dia ny Zak. 8 : 18 – 23 / Lio. 2 : 8 – 14 / Rom. 1 : 1 – 7. Mialoha ny hafatra dia natao ny FFPM 70 : 3 “Izy no Tompo nahary ..”.
Ny filazantsara araka ny Lioka 2 : 14 no nitondran’ny mpitandrina ny hafatra “Voninahitra ho any amin’ny Avo indrindra ho an’Andriamanitra Ary fiadanana ho ety ambonin’ny tany ho an’ny olona ankasitrahany”.
Izany lohahevitra izany no nentina namakivaky ity herinandro sambatra ity.
Tety ampiandohana dia nilaza ny mpitandrina fa toa rabirabian’ny olona ny vanimpotoanan’ny Noely. Jentilisa hoy ny sasany no mankalaza ny Noely fa ny Jiosy tsy manao izany. Io fahaterahan’I Jesoa io nefa fiandohan’ny tantaram-pamonjena. Tsy maintsy teraka Izy aloha izay vao misy ny tantara rehetra.
Ny mahavariana nefa hoy ny mpitandrina dia olona farak’izay tsotra no nahafantatra ny fahatongavan’ny mpamonjy: ny mpiandry ondry izany.
Fa mpamonjy no tonga ety …., teny soa lehibe izany.
Rehefa teraka Jesoa dia betsaka no tsy nino. Ehefa maty indray Izy dia tena maro no nadrabiraby hatrany, hiarahantsika mahalala izany.
Ao amin’ny tantaran’ny baiboly, rehefa misy firenena roa miady, ka resy ny fivavahany, dia resy ihany koa ny andriamaniny.
Efa resy avokoa nefa izay fivavahana hafa rehetra satria efa fiadanana no tonga ety ambany masoandro dia Jesoa Kristy.
Rehefa tonga manko Jesoa Kristy dia vita ny fampihavanana tamin’Andriamanitra ary vita ny fampihavanana amin’ny olona samy olona. Izay no dikan’ilay Lakroia, hazo fijaliana. Ilay mitsivalana dia fifandraisan’ny olona samy olona ary ny mitsangana dia fifandraisan’ny olona amin’Andriamanitra.
Rehefa misy zavatra nirinao teo amin’ny fiainanao ka tonga izany dia izay no tena mahafaly. Dia toy izay I Jesoa Kristy, tanteraka ny fahatongavany satria tonga nofo Izy.
Rehefa lavo tokoa manko Adama sy Eva dia nipetraka teo ambany fahatezeran’Andriamanitra ny olona. Izany fahotana rehetra izany nefa dia ho ahafahan’Andriamanitra avokoa, ary ny tantara dia miantomboka amin’ny fahaterahana.
Vita fihavanana ny olona samy olona noho ny fahatongavan’I Jesoa Kristy. Ny firenena rehetra dia hifamela heloka avokoa. Rehefa tonga ny zanak’olona dia afaka tamin’ny fahotana tany aloha izy.
Izay no namaranan’ny mpitandrina ny hafatra nilazany fa ho tanteraka tokoa anie ny fiadanana ety ambany masoandro.
Taorian’ny toriteny dia nanao ny Anjara hira ny Hasin’ny Famonjena “Tokanana fanantenana” an’i Noel Rakotoarivony.
Nanao ny vavaka fangatahana ny mpitandrina taorian’izany. Nangataka ny mpitandrina mba ho tanteraka ny hafatra izay nampitaina, ho vita ny fihavanan’ny olombelona amin’Andriamanitra ary ihany amin’ny samy olombelona. Nametraka ampelatanaNy ny synodam-paritany rehetra, sy ny Fiangonana ao aminy. Nangataka ho an’ireo zanaka ampielezana, ireo vahiny mba ahatsiaro fa hafa ny Noely nandalovana tao Amparibe. nitondra ambavaka ny mpitandrina noho ireo loza maro nihatra tamin’ny firenena, ireo namoy ny ainy maro an-dranomasina, ireo tsy salama maro izay any amin’ny hopital. Enga anie ahazo fahasitranana izy ireo.
Natao ny Ffpm 75 : 1 “Andro malaza” mialoha ny nanononana ny tondrozotra sy nanomezana ny tsodrano. Natao kosa ny andininy 2, taorian’izany.
Nofaranana tamin’ny vavaka mangina ny fotoana ary niroso tamin’ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo.
Nandray antsoratra : Robel Hanitra
Nitendry Orga : SMZM
Nanao fanamafisam-peo : Rabiazamaholy Hery Lanto
Nanao ny fafana : Rajaofetra Arielle
Alahady 19 Desambra 2021
Alahady ivom-bokatry ny Fikambanan’ny Mpitoriteny sy ny Katekista ary ny nahavita fiofanana
« Ary izay zavatra efa renao tamiko teo anatrehan’ny vavolombelona
maro dia atolory ny olona mahatoky izay hahay
mampianatra ny sasany koa » II Timoty 2 :2
Alahady natokana hitondrana amim-bavaka ny Fikambanan’ny Mpitoriteny sy ny Katekista ary ny nahavita fiofanana, sady ivom-bokatra eto amin’ny Fitandremana FJKM Amparibe Famonjena. Alahady farany amin’ny Trinité sady ankatoky ny Fety Krismasy ihany koa.
Rabako Miora, diakona, no nitarika ny fanompoam-pivavahana ka ny litorjia fahatelo no notanterahina. Razanamparany Clément, loholona, no nitondra ny Tenin’Andriamanitra.
Nisy feon-javamaneno nandritra ny fidiran’ny mpitarika sy ny diakona.
Nohiraina ny Hira fanevan’ny faha-160 taonan’ny Fiangonana «FA MASINA NY TEMPOLIN’ANDRIAMANITRA DIA IANAREO IZANY » mialoha ny fanombohan’ny fanompoam-pivavahana.
FANOMBOHANA NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA
Ho fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra ary ho fanomezam-boninahitra Azy dia niarahan’ny Fiangonana namaky teo am-pitsanganana ny Salamo. 100 manao hoe : « Mihobia ho an’i Jehovah, ry tany rehetra. Manompoa an’i Jehovah amin’ny fifaliana. Mankanesa eo anatrehany amin’ny fihobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra. Izy no nanao antsika, ary Azy isika. Dia olony sy ondry fiandriny. Midira eo amin’ny vavahadiny amin’ny fisaorana. Ary eo an-kianjany amin’ny fiderana. Misaora Azy, mankalazà ny anarany. Fa tsara Jehovah. Mandrakizay ny famindrampony. Ary mihatra amin’ny taranaka fara mandimby ny fahamarinany».
Nohiraina ny FFPM 16 « Avia ry vazantany o ». Nisy vavaka fisaorana sy fiderana noho ny nahazoana nivory sy niombom-panahy nanatanteraka ny fanompoam-pivavahana. Nisy feon-javamaneno fohy.